Maalinta: Ogast 4, 2019
Wadada Magaalada Izmir Highway ayaa la furay
Wadada Wadnaha ee Istanbul Izmir ayaa la furay: Qeybo cusub ayaa la shaqeynayaa iyadoo qayb ka ah Mashruuca Wadada weyn ee Izmir Istanbul, kaas oo gaabin doona farqiga u dhexeeya Istanbul iyo 3.5. Balıkesir oo Dhameystiran - Kalasaarid Edremit - [More ...]
Qaybta kiiloomitir ee 5 ee Waddada Iskuulka-Izmir, oo yareyn doonta safarka saacadda 3.5 ee u dhexeeya Istanbul iyo Izmir illaa saacadaha 192, ayaa waxaa maanta furay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. Marka waa imisa lacag ah oo sidan loo isticmaalo? [More ...]
Buundada Murat ee Taariikhiga ah Ayaa Laheyn Doonaa Dalxiis
13 ee Mus. qarnigii, oo ay dhiseyso Bridge Seljuks Murat iyo nawaaxigeeda, dalxiiska ayaa loogu talagalay in lagu kasbado. Sida lagu sheegay bayaanka lagu soo daabacay mareegtada rasmiga ah ee Maamulka Xukunka Mus; Bulunan wuxuu ku yaal Webiga Murat iyo 13. qarnigii [More ...]
12 billad oo ka socota Ciyaaraha Fudud ee Turkiga ee Tartanka Triathlon Balkan
Tartannada ayaa la soo gabagabeeyey maalintii koowaad ee 2019 ETU Sprint Triathlon Balkan Championship oo loo soo agaasimey iyadoo la kaashanayo Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul. Xiddigaha, dhallinta iyo bahda ciyaaraha fudud ee ku tartamayey horyaalnimada turkiga ayaa ku guuleystey billadda 12. Turkey Triathlon Federation [More ...]
Wadayaasha Gawaarida TEM ee Firm Tolls ayaa Furay 4.5 Bilo Kadib
Düzce ayaa xidhay wadada isku xidha TEM Highway Kaynaşlı iyo warshadii lagu yiqiin gawaarida eewaywayway dhamaatay xalay fiidkii kadib markay dhamaatay howsha loo furay shacabka. Iskuxirka isku xirka iyo buundada oo ay xaqiijiyeen Wadooyinka Weyn ee Iskuxirka Kaynaşlı TEM Motorway [More ...]
Shirkadaha Dhismaha Wadooyinka ee Magaalada Istanbul Izmir
Meesha laga bilaabayo mashruucu waa Gebze, kana gudubta Izmit Bay inta udhaxeysa Dilovası iyo Hersek Burnu oo leh buundo ganaax ah oo qiyaastii ah 3 Km iyo labada dhinacba. [More ...]
Wadada Wadnaha ee Istanbul Izmir ayaa furmay! : Qaybta kiiloomitir ee 8,5 ee Istanbul Izmir Motorway waxay yareyn doontaa safarka saacadaha 3,5 ee u dhexeeya Istanbul iyo Izmir illaa 192 saacadood 4 August 2019 ee uu soo diray Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan [More ...]
Wadada Wadada Wadnaha ee Istanbul İzmir: Qeybta ugu dambeysa ee 192 kiiloomitir ee Istanbul İzmir, waxay noqon doontaa mid ka mid ah dariiqyada waaweyn ee isku xirka Gobolka Marmara ee Gobolka Aegean, Galbeedka Mediterranean iyo Gobolka Galbeedka Anatolia. [More ...]